John, Lesson 017 - The first six disciples | Waters of Life
Home -- Burmese -- John - 017 (The first six disciples)
ယောဟန် ၁း ၄၀ -၄၂
၄၀ ယောဟန်၏ စကားကိုကြား၍ နောက်တော်သို့ လိုက်သောသူ နှစ်ယောက်တို့တွင် တယောက်ကား ရှိမုန် ပေတရုညီ အနြေ္ဒ ပေတည်း။ ၄၁ ထိုသူသည် မိမိအကို ရှိမုန်ကို ရှေးဦးစွာ တွေ့လျင်၊ ငါတို့သည် မေရှိယကို တွေ့ကြပြီဟု ပြောဆိုလျက်၊ ၄၂ သူ့ကို ယေရှုထံသို့ ပို့ဆောင်လေ၏။ မေရှိယ အနက်ကား ခရစ်တော်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ယေရှုသည် ထိုသူကို ကြည့်ရှု၍ ၊ သင်သည် ယေန၏သား ရှိမုန် ဖြစ်၏။ ကေဖ အမည်သစ်ကို ရလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ကေဖ အနက်ကား ပေတရုဟု ဆိုလိုသတည်း။
ပေတရုရဲ့အကို အနြေ္ဒဟာ တိဗေရိ အိုင်နား၊ ဗက်ဇဲဒမြို့က တံငါသည် တယောက်ပါ။ သူက အပြစ်အတွက် နောင်တရပြီး နှစ်ခြင်းခံကာ မေရှိယ ကြွလာခြင်းကို မြော်လင့်နေသူ။ နှစ်ခြင်းဆရာ့ စကားကို နားထောင်ပြီး သခင်ယေရှုရဲ့ နောက်တော် လိုက်လာသူ။ သူအရမ်းပျော်နေတယ်။ သူတွေ့ထားတာကို ဖုံးမထားနိုင်ဘူး။ သူစိမ်းတွေထက် သူ့ညီကို အရင်တွေ့တယ်။ အကိုဖြစ်သူ အနြေ္ဒဟာ ထက်မြက်တဲ့ သူ့ညီကို သတင်းစကား ပြောပြတယ်။ “ငါတို့ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ သိုးသငယ်၊ ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်ကို တွေ့ကြပြီ။” ပေတရုမှာ သံသယ ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အနြေ္ဒက သွေးဆောင်တယ်။ နောက်ဆုံးတော ပေတရု လိုက်လာပြီး၊ သခင်ယေရှုကို သွားတွေ့ကြတယ်။
ပေတရု ရောက်လာတော့ သခင်ယေရှုက သူ့ကို နာမည်နဲ့ ခေါ်တယ်။ “ကျောက်ခဲ” လို့ အမည်ရတဲ့ နာမည်သစ် ပေးတယ်။ သူ့ရဲ့အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ကို သိတယ်။ ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲ ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျနေတဲ့ ပေတရုရဲ့ နှလုံးသား တခါးပွင့်နေပြီ ဆိုတာ သိတော်မူတယ်။ ပေတရု ချက်ချင်းပဲ နားလည် လက်ခံသွားတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တံငါသည်ကို ကျောက်တုံးဖြစ်ဖို့ စတင်ပုံသွင်းတော်မူပါပြီ။အသင်းတော်ရဲ့ အုတ်မြစ် ဖြစ်လာမယ်။ အနြေ္ဒကတော့ အစောဆုံး ယုံကြည်သူပေါ့။
နောက်တယောက်လည်း ညီအကိုအားဖြင့် ရောက်ရှိလာတယ်။ ယောဟန်က သူ့အကို ယာကုပ်ကို သခင်ယေရှုထံ ခေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာ သူတို့နှစ်ယောက် နာမည်ကို မဖေါ်ပြဘူး။ သိမ်မွေ့တဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါကြောင့် အနြေ္ဒနဲ့ ယောဟန်ဟာ အစောဆုံး ယုံကြည်တဲ့သူတွေပေါ့။
ဒီအဖြစ်အပျက်အကြောင်း ရေးတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေက ခေတ်ကာလသစ်ရဲ့ ရောင်နီလာစ ကာလလေးပေါ့။ သူတို့မှာ တကိုယ်ကောင်းစိတ် မရှိ။ ညီအကိုကို ခရစ်တော်ထံ ခေါ်လာတယ်။ ဒီအချိန်မှာ လမ်းတကာ သွားပြီး မဟောပြောသေးဘူး။ ကိုယ့်အဆွေအမျိုးကိုပဲ ဟောသေးတယ်။ အတွေးအခေါ်သမားတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို မပြောသေးဘူး။ ဆာငတ်သူ၊ နောင်တရသူ၊ ကြေကွဲနေသူတွေကို ရှာကြတယ်။
ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတော်အကြောင်း ပြောရာမှာ စိတ်အားကြီးထက် ဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ ပြောတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ သူတို့က ကျမ်းစာကျောင်း မတက်ခဲ့ကြရဘူး။ သူတို့အကြောင်း စာအုပ်တွေလည်း မရေးခဲ့ကြဘူး။ နှုတ်နဲ့ သက်သေခံရုံပါပဲ။ သခင်ယေရှုကို တွေ့ကြ၊ မြင်ကြ၊ ကြားကြတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ အခွင့်အာဏာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဧဝံဂေလိ တရားအားဖြင့် သခင်ယေရှုကို တွေ့ပြီလား? မိတ်ဆွေတွေကို စိတ်ရှည်စွာနဲ့ ပြောပြပါရဲ့လား?
ဆုတောင်း ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သခင်ယေရှု။ ကိုယ်တော်နဲ့ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးခြင်းအားဖြင့် သူတပါးကို ပို့ဆောင်နိုင်စေပါ။ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ဧဝံဂေလိ လုပ်နိုင်စေပါ။ ရှက်ကြောက်စိတ်ကို ခွင့်လွှတ်လျက် ရဲ့ရင့်စွာ သက်သေခံစေပါ။
Page last modified on April 01, 2019, at 03:17 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)